केन्द्रले प्रदेश नं. २ लाई बढी बजेट र अधिकार दिनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता केन्द्रले प्रदेश नं. २ लाई बढी बजेट र अधिकार दिनुपर्छ
on: April 29, 2018 अन्तरवार्ता
केन्द्रले प्रदेश नं. २ लाई बढी बजेट र अधिकार दिनुपर्छ
शिवशङ्कर शाह नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष हुन् । प्रदेश नं. २ को समुन्नत विकासका लागि प्रदेश सरकारको एक्लो पहलले केही गर्न नसक्ने बताउने शाह सङ्घीय सरकारले विशेष सहयोग र कार्यक्रम नदिएसम्म सङ्घीयता सफल हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकतम अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेश नं. २ लाई नमूना प्रदेश बनाउन केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको ठम्याइ छ । सङ्घीयताको आवाज प्रदेश नं. २ बाट आएको र यसलाई सबलीकरण गरी सङ्घीय नेपाल सबल हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, शाहसँग आर्थिक अभियानका पूर्णभक्त दुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ सङ्घीय संरचनामा गएपछि गठित महासङ्घको २ नम्बर प्रदेशको पहिलो अध्यक्ष बन्नु भएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?
जिम्मेवारी थपिएको आभास भइरहेको छ । प्रदेश नं. २ को उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि पहलकदमी लिनुपर्ने बेला आएको छ । यो प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ठोस पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि पूर्वाधार विकास कसरी गर्ने भनेर लागिपरेको छु । विद्युत् समस्यालाई हल गर्न, वीरगञ्जको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई २ सय बिगाहाबाट विस्तार गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेको छु । यसलाई १ हजार बिगाहामा विस्तार गर्नुपर्छ ।
प्रदेश नं. २ मा उद्यम व्यवसाय विकास गर्न के गर्नुपर्छ ?
लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यसपछि यहाँका उद्योगी व्यवसायीको सुरक्षा हुनुपर्छ । भूमिगत सङ्गठनहरूबाट आइरहने थ्रेटबाट उद्यमी व्यवसायीलाई मुक्त गर्नुपर्छ । यहाँका उद्योगहरूमा भइरहेको विद्युत् समस्या समाधान हुनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई २ सय बिगाहाबाट १ हजार बिगाहामा विस्तार गर्नुपर्छ । थप औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्छ । पथलैया–वीरगञ्ज कोरिडोर घोषणा हुनुपर्छ । यसका साथै जनकपुर–भिठामोड र नवलपुर–मलङ्गवा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ ।
प्रादेशिक संरचना भएपछि निकै अपेक्षा बढेका छन् । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
संविधान अलि हतारमा आएको हो कि भन्ने अनुभव भइरहेको छ । हतारमा जारी भएकै कारणले गर्दा अहिले प्रत्येक कदममा समस्या देखिन थालेको छ । शक्ति बाँडफाँट स्पष्ट नभएकाले पनि यस्तो समस्या आएको हुनुपर्छ । सङ्घीयता अहिले ‘पानीमै मछरी नौ नौ कुटियाको बखरा’ अर्थात् माछा मार्ने कहिले कहिले भागबण्डा पहिले जस्तै भएको छ । प्रादेशिक संरचनाका बारेमा मुख्यमन्त्री आफै अनभिज्ञ छन् । मुख्यमन्त्रीको काम के हो भन्नेमा उनी आफै पनि अन्योलमा छन् । यसैले सङ्घीयता पूर्णरूपमा लागू हुनेमा शङ्का छ अर्थात् सम्भावना कम भइरहेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई बम प्रहार गरेपछि यो प्रदेश राज्यको आँखाको कसिङ्गर बनेको हो । यही कारणले यहाँका जनता राज्यबाट उपेक्षित भए र विभेदमा परे । जसका कारणले यहाँ सङ्घीयताको आवाज अन्य क्षेत्रमा भन्दा चर्को रूपले आयो । यसैले यो प्रदेशलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । यो प्रदेशमा सङ्घीयता सफल हुन सकेन भने पूरै देशमा सङ्घीयता असफल हुन्छ । यसैले केन्द्र सरकारले यो प्रदेशलाई बढी बजेट र अधिकार दिनुपर्छ ।
यो प्रदेशको विकास सम्भावना कस्तो पाउनु भएको छ ? यो प्रदेशका आर्थिक विशेषता कस्ता छन् ?
यो प्रदेशमा गैरवाम गठबन्धनको अर्थात् मधेशवादीको सरकार छ । आर्थिक सम्भाव्यताका सम्बन्धमा सबै जिल्ला भारतसित जोडिएका छन् । समुद्री बन्दरगाहबाट यो प्रदेश सबैभन्दा नजीक छ । उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र वीरगञ्ज र धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुर यहीँ छन् । खेतीयोग्य जमीन पनि यतै छ । दैनिक २० करोडको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको वीरगञ्ज भन्सार यसै प्रदेशमा पर्छ । तर, त्यो राजस्व केन्द्र सरकारमै जाने भएकोले प्रदेशलाई सो आम्दानीको पनि खास अर्थ छैन । धार्मिक पर्यटनका लागि जनकपुरधाम र गढीमाई जस्ता स्थलहरू यही प्रदेशमै छन् । यी ऐतिहासिक ठाउँहरूको विश्वसामु आवश्यक प्रचार राज्यले गर्न सकेको छैन । प्रदेश नं. २ को तत्कालीन ठूलो सम्भावना भनेको कृषि उपजमा हो । यस्ता उपज आधारभूत आवश्यकता वस्तु भए पनि बहुमूल्य होइनन् ।
त्यसकारण यसले मात्रै समृद्धि आउँदैन । कृषिका साथै पर्यटन, औद्योगीकरण, सामाजिक सेवामा विकास ग¥यौं भने समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ । कृषिको विकासका लागि सुनकोशी कमला डाइभर्सन गरेर सिँचाइ आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकियो भनेचाहिँ यही प्रदेशले पूरै देशलाई पाल्न सक्छ । माछापालनबाट पनि समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । यसैगरी आँपका लागि पनि २ नं. प्रदेश प्रख्यात छ । यसको बजारीकरण आवश्यक छ । बहुमूल्य रातो बासमती चामल यहाँ उब्जनी हुन्छ । यसको उत्पादन अहिले हराउँदै गएको छ, किनभने यसमा आधुनिकीकरण भएन । धान उत्पादनमा पनि आधुनिकीकरणको आवश्यकता छ ।
यसबाहेक अरू आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू के छन् त ?
धार्मिक पर्यटनको सम्भावना यहाँ अधिक छ । यो क्षेत्रलाई बहुधार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यहाँ रामजानकी मन्दिर छ । यहाँ नेपाल र भारतका विभिन्न गाउँ भएर १५ दिने परिक्रमा गर्ने परम्परा छ । सप्तरीको भमरीमा शिख धर्मको हजार पानाको हस्तलिखित दुर्लभ ग्रन्थ रहेको छ । यो सयौं वर्ष पुरानो दस्तावेज हो । महोत्तरीको रौजाबजार मुुस्लिमको आस्थाको केन्द्र हो । धनुषाको धवौली जैनहरूको गन्तव्यस्थल हो । यी धार्मिक केन्द्रहरूको सौन्दर्यीकरण र व्यापारीकरण गर्न सक्यौं भने भारतीय पर्यटकको चाप बढ्नेछ । यही कारणबाट उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गराउन लोभ्याउन सकिन्छ । चुरे क्षेत्रमा बौद्ध स्तुपाहरू थुप्रै छन् । यसबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई आकर्षित पार्न सकिन्छ । यहाँ हिन्दू धर्मका ठूल्ठूला मन्दिर छन् । धनुषामा जानकी मन्दिर, महोत्तरीमा जलेश्वर, सप्तरीमा कङ्कालिनी मन्दिर र बारामा गढीमाई मन्दिर छ ।
औद्योगीकरणका लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
२०४६को राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरू र कम्पनीहरू धरापमा परे । यही क्रममा जनकपुर चुरोट कारखाना पनि धरापमा प¥यो । अब यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल अपनाउनुपर्छ । २ नं. प्रदेशमा धेरै फलफूल उत्पादन हुन्छ । यहाँको कृषि उपजलाई अझ बढावा दिन सस उद्योग र जुस उद्योग स्थापना गर्न सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । सरल र सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति बनाउनुपर्छ । वीरगञ्ज शैक्षिक क्षेत्रमा पनि अग्रणी रहेको छ । वीरगञ्जका साथै जनकपुर पनि शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र हुन् ।
आर्थिक गतिविधि र सम्भावित स्रोतमा अगाडि भएर पनि यो प्रदेश मानवीय विकासमा निकै पछाडि परेको देखिन्छ, कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्स्फोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को बहुआयामिक गरीबी अध्ययन प्रतिवेदनले २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले २ नम्बरलाई भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा अत्यन्तै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशपछिको स्थानमा राखेको छ । कर्णालीको गरीबी ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय औसत करीब २९ प्रतिशत छ ।
यसरी यो प्रदेशका जनता गरीब हुनुको कारण राज्यको उपेक्षा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसका कारणले पनि धेरै जनता विदेशिएका छन् । विदेशिएकै कारणले यो क्षेत्रमा बढी रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रिएको पनि छ । तर त्यो विप्रेषणको सदुपयोग हुन सकेको छैन । विप्रेषणबाट मोबाइल, टीभी, लुगाफाटा किन्नेबाहेक खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।
राज्यले यही क्षेत्रबाट बढी राजस्व सङ्कलन गर्छ । तर, राज्यले बजेट विनियोजन भने १० प्रतिशत पनि यो क्षेत्रमा गरेको छैन, जब कि यहाँबाट ७८ प्रतिशत राजस्व उठ्छ ।
प्रदेश नं. २ को विकासका चुनौती र बाधक कस्ता छन् ?
विकासको बाधक मुख्यगरी औद्योगिक वातावरण छैन । लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता छैन । पूर्वाधार विकासलाई दु्रत गतिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । उद्योगमा कुनै तत्त्वबाट नोक्सानी पुर्‍याइयो भने सहजरूपमा क्षतिपूर्ति पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
२ नम्बर प्रदेशको नेतृत्वले विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको देखिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
२ नं. प्रदेश सरकारले विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएकोमा निजीक्षेत्र अत्यन्तै उत्साही छ । प्रादेशिक सरकारले बनाएको नीति र कार्यक्रमलाई सबल तथा सफल बनाउनका लागि यो सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य र शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति बनाइएको छ । त्यसैगरी, सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश लगानी बोर्डले वीरगञ्ज–पथलैया, जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केबर र रूपनी–राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ । सिँचाइका लागि सुनकोशी कमला डाइभर्सन र बागमती तथा नारायणी नदीको प्रयोग गर्न अन्य प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि सरकारको नीति छ । यी कार्यक्रम र नीति अत्यन्तै सराहनीय र स्वागतयोग्य छन् । यसलाई सफल पार्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै पर्छ ।
अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ त ?
२ नं. प्रदेशबाट उठ्ने राजस्वमा अन्तःशुल्क, भ्याट, भन्सारमध्ये एउटाको अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । यस्तो गरिएको खण्डमा मात्र प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ र आफ्नो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्छ । यसबाहेक सङ्घीय सरकारले अधिकार बाँडफाँट गरेर प्रदेशलाई समृद्ध बन्ने बाटो खोलिदिनु पर्छ ।
आर्थिक विकासमा तपाईंका अन्य केही विचार र एजेण्डा छन् कि ?
प्रदेश सरकारले आर्थिक समिति बनाएर उद्योेग वाणिज्य सङ्घलाई पनि त्यसमा सदस्य राख्ने भनेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यस्तो चिठ्ठी आइसकेको छैन । यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
समान आर्थिक विकास हुने गरी २ प्रदेशलाई पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । किनकि जनसङ्ख्याको दृष्टिले २ प्रदेश दोस्रो ठूलो हो । भूगोलको हिसाबले भने २ नं. प्रदेश सबैभन्दा सानो छ । सबैजसो तराई क्षेत्र नै रहेको प्रदेश नं. २ को अलिकति सम्भावना भनेको कृषि नै हो । त्यसपछि धार्मिक पर्यटन हो । यस प्रदेशलाई सबल बनाउन र सन्तुलित आर्थिक विकास गराउन फाष्ट ट्र्याक र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण छिटो गरिनुपर्छ ।
अर्को कुरा अहिले स्थानीय सरकारले विकासको नाममा विनाश गरिरहेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । यसलाई तीनओटै सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको धज्जी उडाउँदै प्रहरी प्रशासनको आडमा उचित मुआब्जा नदिईकनै निजी जग्गा अधिग्रहण गरिरहेका छन् । प्रहरी उतारेर जनतालाई दुःख दिइरहेको छ । कम्तीमा बैङ्कले गर्ने मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा दिएको खण्डमा स्थानीय उद्यमी, व्यापारीहरूको लगानी डुब्ने थिएन ।
Pradesh no2matra Bikas ra samriddhi ko khacho ho ki sampurna Nepal jaha abikasit kshetra6ra euta cetamol ko aabasyakata le aljhirakheko6tyo thauma ho bajet badhaaunu parne